Shiinaha Flat design light light 24V 10Ah lithium batteriga LiFePO4 baakid batari oo loogu talagalay soosaaraha curiyaha curyaanka korantada LIAO
1. Dahaarka PVC 24V 10Ah LiFePO4 baakidhka batari ee curyaanka curyaamiinta ee korontada ku shaqeeya.
Qaabka Lambar ENGY-F2410N
Awoodda magaceed 24V
Cabbir 313mm * 32mm * 134mm
Codsiga Gawaarida Naafada ee korontada, korontada
3. Miisaanka Fudud: Kaliya qiyaastii 1/3 culeys baytariyada aashitada leedhka.
4. Badbaadinta sare: LiFePO4 teknolojiyaddu waa nooca batari lithium-ka ugu ammaansan ee laga aqoonsan yahay warshadaha.
5. Naqshad fidsan, aad ufudud u ah kor u qaadista iyo dhaqaaqa.
6. Heer is-sii-deyn hooseeya: ≤3% ee awoodda magacaabidda bishiiba.
7. Tamarta cagaaran: Ma laha wasakhaynta deegaanka.
8. Wax saameyn ah oo xagga xusuusta ah ma laha, cufnaanta tamarta sare.
Lifepo4 Batariga Loogu Tala Galay Codsiga Curyaamiinta Korontada Hordhac
Farqiga aasaasiga ah ee mootooyinka korantada ee caadiga ah, mootooyinka batteriga, baaskiiladaha iyo aaladaha kale ee gaadiidka ayaa ah in kuraasta curyaamiinta korontada leh ay leeyihiin ilaaliyaal caqli-gal ah oo shaqeynaya. Maalmahan, kuraasta curyaamiinta korontada ku shaqeeya waxay u noqdeen gaadiid lagama maarmaan u ah waayeelka iyo naafada. Waxay ku habboon tahay waxyaabo kala duwan. Ilaa iyo inta isticmaaluhu leeyahay miyir cad iyo awood garasho oo caadi ah, kuraasta curyaamiinta korontada ku shaqeeya waa xulasho wanaagsan, laakiin waxay u baahan yihiin qaddar go'an oo loogu talagalay waxqabadyada. .
Qalabka korontada waxaa lagu dulsaaray kursiga curyaamiinta ee gacanta lagu qaato, batteriga lithium waxaa loo isticmaalaa sida isha laga helo, aluminiumka aluminiumka aluminium iyo naqshadda ergonomic ayaa la qaatay si loo xaqiijiyo qaab dhismeedka curyaamiinta korontada leh oo leh awood sare, xamuul sare, iftiin miisaanka, mugga yar, iyo laab laaban karo wakhti kasta.
1. Daawadeyaal ballaadhan. Marka la barbardhigo kuraasta curyaamiinta dhaqameed, shaqooyinka awoodda badan ee curyaamiinta curyaamiinta korantada ah kuma habboona oo keliya waayeelka iyo kuwa itaalka daran, laakiin sidoo kale waxay ku habboon yihiin dhaawacyada daran ee naafada ah. Xasiloonida, awoodda muddada dheer socotaa, iyo la qabsashada xawaaraha ayaa ah faa'iidooyinka gaarka ah ee kuraasta curyaamiinta korantada.
2. Habboon. Kursiga curyaamiinta riixitaanka dhaqameed waa inuu ku tiirsanaadaa riixitaanka aadanaha oo uu jiidayaa si uu horay ugu socdo. Haddii uusan qofna ag joogin, waa inaad riixdaa rullaluistemadka adiga kaligaa. Kuraasta curyaamiinta korontada way ka duwan yihiin, ilaa iyo inta ay si buuxda u buuxsameen, si fudud ayaa loogu shaqeyn karaa iyada oo aan loo baahnayn in xubnaha qoysku ay la socdaan markasta.
3. Ilaalinta deegaanka. Ku wadida batteriga lithium, dib ayaa loogu soo celin karaa si isdaba-joog ah, cabir yar, culeys fudeyd, keydinta tamarta iyo ilaalinta deegaanka.
4. Amniga. Tikniyoolajiyadda soosaarida curyaamiinta korontada ayaa marba marka ka sii dambeysa sii kordheysa, qalabka bareega ee jirka ayaa si ballaaran loo soo saari karaa ka dib marka la tijaabiyo oo ay u qalmaan xirfadlayaal. Suurtagalnimada in lumiyo xakamaynta kuraasta curyaamiinta korontada ku dhow waxay ku dhowdahay eber.
5. U isticmaal kuraasta curyaamiinta korontada si aad u xoojiso awoodda is-daryeelid. Kursiga curyaamiinta korontada ku shaqeeya, waxaad ka fiirsan kartaa inaad sameyso waxqabadyo maalinle ah sida dukaamaysiga, karinta, hawo qaadashada, iwm.
Hore: Wax saameyn ah oo xasuusta ah malaha 36V 30Ah LiFePO4 baakad batari leh tilmaame danab iyo gacan qabasho
Xiga: Nooca Bolt-ka nooca loo yaqaan 'Bolt' prismatic 3.2V 10Ah LiFePO4 unugga baytariga ee korontada iyo keydinta tamarta
Wax saameyn ah oo xasuusta ah malaha 36V 30Ah LiFePO4 baakad batari leh tilmaame danab iyo gacan qabasho
Kalluunka qalinka ah quwadda cagaaran ee 36V 10Ah LiFePO4 baakid batari baaskiil koronto